Kobe Motor Company Carmudi Myanmar [Burma]
09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	email ပို့ရန်	Kobe Motor Company	ယုံကြည်ရသော ရောင်းသူ	သင့်ရဲ့ နာမည် အီးမေးလ်
Kobe Motor Company –
No. 91, Ar Zarni Street, 5th Ward, Mayangone Township, Yangon.
Kobe Motor Company is one of the pioneering and emerging leaders in the used car export market from Japan and Singapore. Our services are well tailored to customers’ choice and need of vehicles. အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
Kobe Motor Company အတွက် တင်ပြထားတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာ‌တွေမရှိ‌သေးပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး အ‌နေနဲ့ အ‌တွေ့အကြုံကို တင်ပြတဲ့သူလုပ်လိုက်ပါဦး။